VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ nnọọ ihe kasị mkpa a pụrụ ịdabere na mgbasa ozi ọkpụkpọ na ahịa nke na-enye ohere ọrụ ịrụ ọrụ nke ndị ọzọ Player mgbe ekwe ka onye ọrụ ịrụ. Otu onye dị otú atụmatụ nke VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ ime ka n'aka na screenshots na-weghaara na nke kacha mma n'ụzọ nke mere na ihe nkiri kacha amasị Mpaghara na-converted desktọọpụ ndabere na foto na-ọbụna kpọfere mobile na nkwonkwo na ndị ọrụ ndị ọzọ. Ndị kasị dị oké mkpa njikọ a nkuzi bụ na usoro nke ewere Ihuenyo NA VLC BỤ OTU NA Windows na Mac. Otú ọ dị iji zere myirịta abụọ dị iche iche na mfe usoro na-kwuru na a mgbe ọ na-abịa a nkuzi.
Part1: Were ihuenyo Snapshots na VLC Media Player on Mac
Part2: Were ihuenyo Snapshots na VLC Media Player on windows
Part3: FAQ banyere VLC
m. Onye ọrụ kwesịrị ẹkedori VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ nke mere na ndị na-esonụ interface egosi:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ihe ndị ha chọrọ video na-egwuri dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
III. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa video nhọrọ n'ime isi mmanya n'elu VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ nke a pụrụ hụrụ na foto nke e pasted n'okpuru:
too ogologo. Ikpeazụ nhọrọ nke ndepụta bụ na-snapshot otú onye ọrụ kwesịrị ka pịa ya nke e gosiri n'okpuru:
v. On Mac nseta ihuenyo ga-akpaghị aka zọpụta na desktọọpụ si ebe onye ọrụ nwere ike ịnweta ya n'oge ọ bụla ọ chọrọ nakwa na okokụre usoro dị ka mma.
Part 2. Were ihuenyo Snapshots na VLC Media Player on windows
Usoro nke na-ewere screenshots on Mac na windows usoro bụ otu Otú ọ dị n'ihi na mma nke ọrụ dị iche iche usoro a ga-kwuru n'ihi na windo nke mere na onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla nke na nke a:
m. Na-ebute usoro onye ọrụ kwesịrị ka okpukpu abụọ pịa VLC media icon mere na ndị na-esonụ ihuenyo egosi:
ii. Onye ọrụ ugbu a kwesịrị na-egwu video nseta ihuenyo nke a chọrọ ka e gosiri n'okpuru:
III. Dị ka a nzọụkwụ ọzọ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na pụta ìhè button na-enwe na-chọrọ screenshot ka e sere na foto n'okpuru:
too ogologo. Na windows nseta ihuenyo na-akpaghị aka weghaara na C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ My Pictures si ebe onye ọrụ nwere ike ịnweta ha na-eji dị ka kwa ọchịchọ ha na uche.
Part 3. FAQ banyere VLC
-Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mkpa nke onye ọrụ ihu na-eji VLC ka weghara screenshots ọbọrọ nwekwara e kwuru hereunder:
1. VLC snapshot-adịghị arụ ọrụ
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihe na-eduga mbipụta na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ffmpeg update-edu ndú ka nsogbu a.
m. Onye ọrụ kwesịrị ka ịnweta mmasị nke VLC dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka ịnweta video nhọrọ dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
III. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa ịgbanwe usoro jpg iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri:
N'ihi na Mac na shortcut ma ọ bụ hotkey bụ Wụk + alt + S
N'ihi na Windows na shortcut ma ọ bụ hotkey bụ Mgbanwe + S
Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na windows shortcut metụtakwara Linux na Unix ịwa usoro dị ka mma.
3. VLC snapshot iwu akara
Dị ka e kwuru n'ihu iwu akara ma ọ bụ keyboard iwu nke VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ dị iche mgbe ọ na-abịa sistem Otú ọ dị ya bụkwa na-ahụ kwuru na mmasị ga-agbanwe na-esonụ usoro a soro dị ka e kwuru nke mere na okwu a bụ nke kpebiri ndị kasị mma mmasị nke onye ọrụ na onye iwu e nyere dị ka kwa ala nke onye ọrụ na nke a. Ịgbanwe chọrọ ntọala onye ọrụ kwesịrị ka-eso ụzọ ie Ngwaọrụ> mmasị> Hotkeys dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
Alternatively onye ọrụ nwekwara ike tọgharịa mmasị iji jide n'aka na ndabara VLC ọkpụkpọ ntọala na-eji bụrụ na onye ọrụ chere na ha.
4. Olee na-elu àgwà VLC screenshots
Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-eche ihu nsogbu na nke a dị ka screenshots na na-e bụ obere nke ọma. The ụzọ mkpebi bụ Ngwaọrụ> mmasị> video> format dị ka nwere ike hụrụ n'okpuru:
Dị ka ihe nnwale onye ọrụ kwesịrị ka na-screenshots site na-agbanwe format oge ọ bụla iji jide n'aka na nke kacha mma mma na mmepụta site dị ka mkpa nke onye ọrụ. The formats na-metụtara ngwaike nke usoro otú ọ na-gwara ka ego site na-ewere atọ dị iche iche screenshots otu onye maka otu ụdị format iji jide n'aka na ihe kasị mma a họọrọ maka ọdịnihu.
> Resource> VLC> Were Snapshots na VLC Media Player on Windows na Mac